ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ စကားလေးနဲ့ ပရိသတ်များကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ခြူးလေး – Zeekwat Hot News
ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ စကားလေးနဲ့ ပရိသတ်များကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ခြူးလေး
May 17, 20190509
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးချိုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခြူလေးက ပရိသတ်များကို ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ စကားလေးနဲ့ တောင်းဆိုစကားလေးတစ်ခွန်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ခြူးလေးက “ကလေး👶 တစ်ယောက် ဖြစ်ခွင့်ပေးပါ ….. 💙💙💙” လို့ တောင်းဆိုကာ lollipop လေးကိုင်ပြီး ကလေးမလေးတစ်ဦးလို ပို့စ်ပေးကာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်များကို သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကပဲ ခြူးလေးဟာ “ကဝေသေလို့ ခြောက်တဲ့ တစ္ဆေ ” ကားကြီးကို မြတ်မြင့်နဲ့ သက်မွန်မြင့်တို့နဲ့အတူ နယ်မြို့လေးမှာ သွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြူးလေးတစ်ယောက် Idol များနဲ့ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားများနဲ့အတူ အတော်လေးပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးများကို မျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်။
MRTV4မှ ထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိသော မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော သရုပ်ဆောင် ခြူးလေးဟာ မော်လ်ဒယ်မလေးတစ်ဦးအဖြစ်ပါ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်လာသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ ပြောပုံဆိုပုံလေးကြောင့် ပုရိသကောင်လေးများသာမက မိန်းကလေးပရိသတ်များကလည်း ချစ်ခင်အားပေးခဲ့ပါတယ်။
Source From Chue Chue
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုံးခြိုလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သရုပျဆောငျ ခွူလေးက ပရိသတျမြားကို ခဈြစဖှယျကောငျးတဲ့ စကားလေးနဲ့ တောငျးဆိုစကားလေးတဈခှနျး ပွောခဲ့ပါတယျ။ခွူးလေးက “ကလေး👶 တဈယောကျ ဖွဈခှငျ့ပေးပါ ….. 💙💙💙” လို့ တောငျးဆိုကာ lollipop လေးကိုငျပွီး ကလေးမလေးတဈဦးလို ပို့ဈပေးကာ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ ပုံရိပျမြားကို သူမရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။မကွာသေးခငျကပဲ ခွူးလေးဟာ “ကဝသေလေို့ ခွောကျတဲ့ တစ်ဆေ ” ကားကွီးကို မွတျမွငျ့နဲ့ သကျမှနျမွငျ့တို့နဲ့အတူ နယျမွို့လေးမှာ သှားရောကျရိုကျကူးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ခွူးလေးတဈယောကျ Idol မြားနဲ့ရုပျရှငျအဖှဲ့သားမြားနဲ့အတူ အတျောလေးပြျောရှငျနတေဲ့ ဗီဒီယိုလေးမြားကို မြှဝခေဲ့ပါသေးတယျ။MRTV4မှ ထုတျလှငျ့ပွသလကျြရှိသော မွနျမာရုပျသံဇာတျလမျးတှဲမြားတှငျ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သော သရုပျဆောငျ ခွူးလေးဟာ မျောလျဒယျမလေးတဈဦးအဖွဈပါ အောငျမွငျစှာ ရပျတညျလာသူလေး ဖွဈပါတယျ။ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မကျြနှာလေးနဲ့ ခဈြစဖှယျကောငျးတဲ့ ပွောပုံဆိုပုံလေးကွောငျ့ ပုရိသကောငျလေးမြားသာမက မိနျးကလေးပရိသတျမြားကလညျး ခဈြခငျအားပေးခဲ့ပါတယျ။
ရိုးရှင်းတဲ့ အလှတရားများကို ၀န်းရံကာ ပွဲတက်လာတဲ့ ခြူးလေး
သမီးလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိတွေဝေနေတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ဇနီးမောင်နှံ
Hey Buddy!, I found this information for you: "ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ စကားလေးနဲ့ ပရိသတ်များကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ခြူးလေး". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/844. Thank you.